Afọ njem njem nke Africa ka akwadobere maka emume a ọnwa a
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Afọ njem njem nke Africa ka akwadobere maka emume a ọnwa a
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
N'ịghọta ọnọdụ nke kọntinent Africa na maapụ njem nlegharị anya ụwa, a ga-eme Daybọchị Afọ Ọchịchị nke Africa maka oge mbụ n'ọnwa a iji bute ụzọ n'ịkwalite na ịzụ ahịa nke ebe ndị njem nlegharị anya bara ụba, ebe ndị njem nleta na ọrụ ndị njem na-enweta na mba dị iche iche n'ime kọntinenti .
Ndi Desigo Tourism Development na Facility Management Company haziri ma hazie ya Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB), a ga - ejikwa isiokwu nke "Africa Tourism Day (ATD) nke isiokwu a:" Ọrịa ịba ọgaranya gaa n'ọkwa maka Posterity ".
A ga-eme Tourbọchị Nlegharị Anya Afrịka nke 2020 na Nigeria, akụ na ụba kasị ukwuu n'Africa na mba ojii kachasị ukwuu n'ụwa site n'ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ. N'ikpeazụ, a ga-agbanwe ihe omume a n'etiti mba Africa kwa afọ, ndị nhazi kwuru.
Ebumnuche nke njem nlegharị anya n'Africa ga-eme ememme ọdịbendị na ọdịbendị dịgasị iche iche nke Africa, na-eme ka a mata banyere nsogbu ndị nwere ike igbochi mmepe, agamnihu, njikọta na uto nke ụlọ ọrụ ndị njem na kwa ịkekọrịta na ịkekọrịta azịza na atụmatụ gafere iji mee njem ahụ. ụlọ ọrụ dị n'Africa.
A ga-emekwa mmemme a ka ọ lekwasị anya na mpaghara ndị njem nlegharị anya n'Africa, iji gosipụta mkpa njem dị na kọntinent ahụ, iji mee ka a mata dịka Tourbọchị Njem Nleta Worldwa nke a na-eme na ọkwa ụwa.
Afrika enweghi ubochi emere dika a na mpaghara Afrika iji mee onu ma lelee njem nleta anya nke bu otu n’ime ndi isi aku na uba ya, ndi nhazi ihe omume kwuru.
Bọchị ọmụmụ nke ụbọchị njem nlegharị anya n'Africa ga-egosipụta oke gafere mba iri ise na ise n'Africa ma nwee mba Afrịka dị iche iche ga-anabata ya kwa afọ nke ga-emeri mmeri ahụ n'afọ gara aga na-agagharị na mpaghara Afrika niile.
Ndị nhazi kwuru na a ga-akara ma mee emume ụbọchị a site na njikọta nke njikọ dị elu, nkwupụta okwu, webinars, njegharị, nzukọ, mmemme, oriri na ọniụ andụ na usoro mmemme.
Ihe omume ndị ọzọ emere maka emume a bụ asọmpi, ihe ngosi okporo ụzọ, egwu egwu, nzukọ, ọgbakọ itinye ego, ngosipụta azụmahịa, ozi ọma na ndị ọzọ.
Ndị na-ahazi mmemme ahụ kwuru na ha na-elele ụbọchị njem njem Afrịka anya site na ụbọchị World Tourism Day (WTD) nke Ignatius Amaduwa Atigbi, onye Naijiria bụ onye bidoro ma bụrụkwa nke UN World Tourism Organisation na-enwe ma na-akwado kwa afọ kemgbe 1980. .
“N’elu ubochi World Tourism Day nke a na-eme kwa afọ n’abalị iri abụọ na asaa nke Septemba, oge eruola ka Africa kpọkọta ndị ikwu na ibe ya n’ ụwa niile iji mee emume nka, omenaala, ọdịnala, anụ ọhịa dị iche iche, usoro okike ha, iche iche ikike ndi ntorobịa na ihe kariri otu ijeri ndi nwere ike ike ha puru iche ”, Ndi nhazi kwuru.
Afrika ga eme onu onyinye onyinye ndi njem ya ebe ha na ebuputa atumatu ya ma nweta azịza nke oma iji gbasosie ike nghagharia, ikwusi ike na njigide nke ngalaba ndi njem nke otutu oria COVID 19 metutara.
Ihe omume nke njem nlegharị anya n'Africa bụ mmekorita ya na ndị isi na-azụ ahịa njem nlegharị anya n'Africa, ndị njem njem njem Afrika. Ebumnuche nke Day Tourism Africa bụ ilekwasị anya na mpaghara ndị njem nlegharị anya Africa.
Ọ bụ ezie na ụwa na-eme ememme ma gosipụta mkpa njem nlegharị anya na ọkwa mba ụwa na World Tourism Day (WTD), Afrịka enweghị ụbọchị a kara aka maka ụbọchị a raara onwe ya nye ndị njem bụ otu n'ime isi akụkụ akụ na ụba ya.
A ga-ahọpụta ndị otu dị mkpa gụnyere ndị njem njem njem n'Africa (ATB), ndị nnọchi anya obodo na ndị ọrụ gọọmentị maka mmekọrịta na nzukọ na isonye na mmemme ahụ.
Ndi otu ndi njem nlere anya nke Africa, UNWTO Commission maka Africa, African Union, Federation of Associations Tourism Associations of Nigeria (FTAN) na ndi ministri ndi njem na Africa dum bu ndi isi na ndi nwere oke ihe omume a.
Otu ìgwè nke ndị mmekọ na ndị ọkachamara ga-etolite Think Tank maka nzukọ na ọdịnihu nke ihe omume a kwa afọ.
Nchịkọta 2020 bụ mbipụta pilot iji wepụta ma webata ụbọchị njem nlegharị anya nke Africa na ịkwadebe maka nnukwu emume na 2021 ma mesịa.
Elsa Tropical Storm hapụrụ Jamaica site na nde $ 803 ...